मलमासमा भगवान् पुरुषोत्तमको पूजा गर्नाले पुण्य मिल्नेछ ! – PathivaraOnline
Home > धर्म सँस्कृति > मलमासमा भगवान् पुरुषोत्तमको पूजा गर्नाले पुण्य मिल्नेछ !
मलमासमा भगवान् पुरुषोत्तमको पूजा गर्नाले पुण्य मिल्नेछ !
admin September 16, 2020 September 16, 2020 धर्म सँस्कृति	0
काठमाडौँ – यस वर्ष असोज २ गते शुक्रबारदेखि ३० गते शुक्रबारसम्म मलमास अथवा अधिकमास परेको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जनाएको छ । ज्योतिषीय गणनाअनुसार ३६५ दिनको वर्ष हुन्छ । वर्षमा सौर र चान्द्रमास हुन्छन् । दुवैलाई समन्वय गर्न ३२ महिना १६ दिन एक घण्टा ३६ मिनेटमा मलमास वा अधिकमास आउँछ । एउटा औँसीदेखि अर्को औँसीसम्म सङ्क्रान्ति छैन भने त्यो महिनालाई मलमास भनिन्छ । – समाचारका अन्य भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहाेस***
भाग्यमानीले मात्र देख्ने यो दुर्लभ जीउँदो दाहिने शंख, कतै देख्नुभएको छ? छैन भने भाग्यमानी सम्झेर शेयर गर्नुहाेस
शुभ बिहानी अर्घाखाँचीमा रहेको शुपा देउराली मन्दिरको दर्शन गरेर गरी आजको राशिफल हेरौ